Iphupha malunga nokuguqulwa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa silungisa into ethile, ikakhulu kungenxa yokuphuculwa, ukulungiswa okanye ukwandiswa kwendlu, iflethi okanye ifanitshala. Amagumbi angatshatanga anokuguqulwa okanye ongezwe, okanye kwanomgangatho wonke. Ukulungiswa kunokuba ngumsebenzi omninzi. Kuxhomekeke kubungakanani ofuna ukuguqula okanye ukuvuselela, ucwangciso olude lwandulela kwaye isigaba sokuguqula ngokwaso sinokudla ixesha, phantse ngokungathi wakhe ikhaya elitsha kraca.
Ukuba yindawo yakho yokuhlala ofuna ukuyitshintsha ngokulungiswa, oku kunokuthetha ukuba abahlali bahlala ixesha elide kwindawo yokwakha egqityiweyo. Oko kunokuba noxinzelelo olukhulu. Nangona kunjalo, unokubona ukuba ukulungiswa kwezinto kuhamba njani kunye nethemba lesiphumo esihle esikunceda usinde kwixesha lokuhlaziya elilungile. Ukuba ii-facade zezindlu ziyahlaziywa, i-scaffolding ihlala ibekwa, apho amagcisa anokuhamba ngodonga lwendlu.
Nokuba ephupheni inokuba luhlaziyo. Mhlawumbi nathi ngokwethu sithatha inxaxheba kuyo okanye sibukele nje into eyakhiwayo kwakhona. Inqaku elilandelayo licacisa ukuba yintoni ebangela olu phawu.
1 Uphawu lwephupha «ukulungisa kwakhona» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «eyila kwakhona» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukubumba kwakhona» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukulungisa kwakhona» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukulungiswa kwakhona kuhlala kungumqondiso wokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha. utshintsho olulungileyo ebomini bomntu ophuphayo. Nabani na oguqula into ephupheni uxakeke ziiprojekthi ezinkulu kunye nezicwangciso. Ngapha koko, inokuba inxulumene nokuthengwa okanye ukwakhiwa kwepropathi. Kodwa nezinye iziganeko zobomi, ezibaluleke kakhulu kwaye zibaluleke kakhulu ekuphupheni, zinokuzibonakalisa ngomfanekiso wephupha "ukulungisa" el mundo kufana nephupha.
Ukuba uzinceda ngokulungiswa, ungaziphumeza izicwangciso zakho ngokuzithemba. Unengcinga eyakhiwe kakuhle kwaye ke yeyona nto ifunekayo ukuze impumelelo elungileyo. Isixhobo esisetyenzisiweyo sinokubonelela ngolwazi oluthe kratya. Ukuba ubona i-spatula, umzekelo, oku kungabhekisa kwimizamo emininzi kwilizwe lokugada.
Kodwa kufuneka ulumke xa ubona ukuwa kohlaziyo ephupheni. Apha imeko yamaphupha ibonisa ukuba enye yayingacacanga kwaye iinkcukacha ezibalulekileyo zilibalekile. Nokuba yeyiphi na, khangela amaxwebhu akho ngononophelo olukhulu. Impazamo encinci inokukhokelela kwintlekele ngokukhawuleza, ke lumka!
Ukuba uguquko lincinci kwaye licacile, oku luphawu kwiitoliki zamaphupha ukuba umntu unokukhawulezisa ukujongana neengxaki ezenzekayo kwaye ezi azizukuchaphazela ubomi bamaphupha. Nangona kunjalo, ukuba uhlaziyo lukhula ngakumbi nangakumbi kwaye lubonakala ngathi alupheli, lunokumemezela ixesha elingenasiphelo elizele ubunzima. Ukuba uhlengahlengisa into ethile kwifenitshala, ngokutsho kwabaphandi bephupha, kungekudala uza kuba nakho ukucinga malunga nemibuzo yezemali. Ukuzuza ndijonge phambili.
Uphawu lwephupha «eyila kwakhona» - ukutolikwa kwengqondo
Abaguquleli bephupha ngokwengqondo batolika "ukubumba ngokutsha" komfanekiso wephupha njengembonakalo ye Tshintsha y utshintsho. Ukuphupha mhlawumbi kuphakamisa umbuzo wokuba yena ngokwakhe ufuna phi ukuvuselelwa okanye indawo engaphezulu.
Indlela ekwakhiwa ngayo ukwenziwa kwakhona inokunika imikhombandlela yokuba izinto zikumphefumlo wakho njani. Ukuba ukulungiswa kuqhubeka ngenyathelo ngenyathelo, oku kuphakamisa ubuntu obulungeleleneyo. Iimeko ezinesiphithiphithi ngexesha lolungiso, imvakalelo yokuba indawo yokwakha ayinakuphinda yenziwe, kwelinye icala, ibonakalisa isiphithiphithi esifanayo kwinqanaba leemvakalelo.
Ubomi bemihla ngemihla buya phi? Unokuba nemvakalelo yokuba yonke into iyalahleka, imingxunya ayinako ukugcwaliswa ngokukhawuleza njengoko ivuleka, kwaye ufuna iingalo nemilenze elishumi ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zobomi kunye nemisebenzi. Apha kunokuba luncedo ukugxila kwizinto eziyimfuneko kuqala kwaye ufune uncedo kunye nenkxaso ukuba kunokwenzeka.
Uguquko, nokuba kuphupha lendlu okanye kwinqanaba elingelolokwenyani, ayisiyiyo into onokuyenza kwaye kufuneka uyilawule wedwa. Yazi oku kwaye uqonde ukuba ukucela uncedo kwabanye okanye ukuthi "yeka" xa sele ufikelele kumda wokusebenza kwakho ayibobuthathaka.
Uphawu lwephupha «ukubumba kwakhona» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uguquko njengomfanekiso wephupha luphawu olunokubakho ukukhula y ukukhula ngokomoya.